Boqolaal Qof Oo Ku Dhintay Biya-xidheen Kusoo Dumay Dalka Brazil – somalilandtoday.com
Boqolaal Qof Oo Ku Dhintay Biya-xidheen Kusoo Dumay Dalka Brazil
(SLT-Brazil)-Sawiro naxdil leh oo la helay ayaa muujinaya biya xidheen kusoo dumay koonfurta waddanka Brazil kaasi oo ku fatahay goob macdanta laga qodo, waxaana ku dhintay ama lagu la’yahay in ka badan saddex boqol oo qof.
Sawirada oo ay duubeen kaamirada qarsoon ee CCTV ayaa muujinaya daqiiqadi biya xidheenku kusoo dumay maqaayad kofeega laga cabo oo ku dhex taalay shirkada macdanta iyo dhismooyinka ku yaala gudaha magaalada Brumadinho ee gobolka Minas Gerais.
Waxaa soconaya howlgal baaritaan ah oo lagu ogaanayo waxa dhlaliyay in biya-xireenkaasi soo dumo.
Goobta macdanta laga qodo ayaa waxaa iska leh shirkad lagu magacaabo Vale SA. Shilkaan ayaana ah kii labaad oo ka dhaca goobaheeda macdanta laga qodo saddex sano gudahood.
Shan qof ayaa loo soo xiray sababaha dhaliyay in biya-xireenku ku fataho goobta macdanta laga qodo.
Dacwad-oogyaasha dalka Brazil ayaa sheegay in saddex ka mid ah dadka lasoo xiray ay yihiin saraakiisha shirkada Vale, kuwaasi oo mas’uuliyadoodu ay ka mid tahay waxka qabashada rukhsadaha saameynta deegaanka.
Shirkada Vale, oo ah tan ugu weyn caalamka ee soo saarta biraha ceeriinka ayaa sheegtay inay la shaqeyn doonto dacwadoogayaashaasi.
Tirada dhimashada ayaa tan iyo khamiistii la xiqiijiyay inay gaarayso 110 qof halka 238 qof oo kalena la la’yahay.
Sidee ayuu u dhacay burburka biya-xidheenku?
Weriyayaasha ayaa soo sheegaya in hanaanka bixiya digniinaha ee u xirnaa shirkada si uu u ugu diro digniinaha khatara dadka deganaa halkaasi uusan shaqeynin.
Dadka ku nool nawaaxigan ayaa sheegay inay maqleen dhawaq xoogan xiligii biya-xireenku soo dumayay.
Tobanaan qof oo go’doomay, intooda badana ay dhoobo qarisay ayaa lagu soo samatabixiyay diyaaradaha aan duuliyaha lahan maadaama wadooyinkii ay burbureen.
Sikastaba, shirkada Vale ayaa sheegeysa in sababta keentay in biya-xireenku soo dumo la baarayo.